उसलाई कसरी मानिसलाई बाँध्ने?
मनोविज्ञान र सम्बन्ध प्रेम
निस्सन्देह, हामी सबै शब्दहरूमा हँसिन्छौं "र उनीहरू पछि खुसी रहन्थे, र कहिल्यै झगडा थिएन।" तर मलाई भन्नुहोस्, हामी मध्ये कुन कुरा जान्न चाहँदैनौं एक प्यारी मानिसलाई सधैं कसरी बाँध्ने? और तलाक को बारे मा पर्याप्त सुने र दुर्भाग्यपूर्ण महिलाहरु लाई पर्याप्त देख्न को लागी हो, त्यसैले यो आश्वस्त हुनु आवश्यक छ कि तपाईंको परिवार अविनाशकारी हो। त्यसोभए तपाई आफैले कसरी एक व्यक्तिलाई बाँधिदिनुहुन्छ?
पतिलाई कसरी बाँध्नु?
उहाँलाई कसरी संलग्न गर्न, धेरै विवाहित महिलाहरु सोच्दै। र यहाँ के सोच्नु हुन्छ कि सबै चीज सरल छ - एक आदर्श पत्नी बन्नु, पहिले नै एक प्रेमको लागि मापदण्ड निर्दिष्ट गर्नु, र उहाँले तपाईंलाई कहिल्यै छोड्नुहुन्न। तर शायद तपाईं पहिले नै हुनुहुन्छ, शायद तपाईं राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ र केहि चीज गर्न आवश्यक छैन? यदि यो हो भने, त्यसो भए सबै डरलाग्दो कुरा, बिचार राख्नुहोस् र तपाईंको पतिलाई दु: ख र दुर्व्यवहार संग चलाउनुहोस्। कुनै प्रविधिले तपाईंको ईमानदार गर्मी र प्रेमलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।
उनको व्यवहार र उनको आदर्शहरु को बीच विचलन? आफैलाई पुनरुत्थान गर्न नसक्नु, पहिला यो यसको लायक छ कि भनेर सोच्नुहोस्। जब तपाईंलाई संकेत गरिएको छ कि यो पोर्चुङ पकाउने बढी ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ (यसमा केही आलुहरू छन्), र अर्को अर्को, यदि तपाईं आफैले आदर्श तोड्न को लागी तोड्नु पर्छ भने। पछि कुनै पनि स्थितिमा पूरा हुँदैन, तपाइँ एक पटक भन्दा बढी यो अफसोस हुनेछ। आखिर, तपाईंको पतिले तपाईलाई रोज्नुभयो र न केवल उसको आँखाको पछाडिको प्रतीकको लागी, तपाईंको अनौठो चरित्रले निश्चित रूपमा यस मानिसको विजयमा भूमिका खेल्दछ। त्यसैले यो आफैं परिवर्तन गर्न लायक छैन, तर यो एक सम्झौता खोज्ने को लागी राम्रो छ कि दुवै उपयुक्त हुनेछ - कुराकानी गर्ने क्षमता र पारिवारिक जीवनमा मूल्यवान छ।
खैर, बाकीको लागि - पतिको रुचिलाई आफ्नो व्यक्तिलाई न्यानो पार्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो तपाईंको कामुकता र तपाईंको व्यापार सफलता दुवै मा लागू हुन्छ। हो, बच्चाको जन्म र उत्थान, चीजहरू महत्त्वपूर्ण छन्, र यदि तपाईं बच्चासँग बस्न सक्नुहुनेछ यो उत्कृष्ट छ। तर तपाईं यो एक्लै गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ महिलाहरु आफैले आफैंलाई बिर्सने बेलामा महिलाहरु आफैले परिवारमा समर्पित युवतीहरूको पतनको कथाहरु छन्। उनीहरूले आफ्नो पतिको साथमा काम गर्न नसक्ने कुराको बारेमा जानकारी दिएका छन्। उनीहरु आफुलाई आफुले आफुलाई बिहे गर्न नसक्ने बताएका छन्। यो रोक्नको लागि, अरू व्यक्तिका गल्तीहरूबाट सिक्नुहोस् र तिनीहरूबाट बच्नको लागि प्रयास गर्नुहोस्।
कसरी विवाहित मानिसलाई तिनलाई बाँध्नु?
वैसे, तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी एक व्यक्तिलाई आफैलाई बाँध्नु, मनपर्ने एक एकल छैन भने? यहाँ देखि यो एक प्रेमी को प्रश्न हो, र पति को नहीं, तपाईं सँग अधिक परिमाण को एक अर्डर हुनेछ। तपाईंलाई स्क्यान्डलहरू, दावीहरू र अस्वीकारहरूको बारेमा बिर्सनु आवश्यक छ, किनभने त्यो पहिले नै यो घरबाट थकिएको छ, र उसले तपाईंलाई देख्न जान्छ, के उसको पत्नीले के गर्न सक्दैन। तर यदि तपाईं सबैभन्दा प्यारी, दया र आज्ञाकारी हुनुहुन्छ भने, त्यो तथ्य होइन कि उसले तपाईंको खातिर तलाकको लागि निर्णय गर्नेछ। आखिर, परिवार केवल एक शब्द होइन, र यो विनाशको रूपमा यस्तो जिम्मेवारी कदम लिन गाह्रो छ। त्यसकारण, कुनै पनि आश्चर्यजनक कुरा छैन कि सारा संसारको मालकिन मान्नुपर्दछ कि यो एक व्यक्तिलाई बाँध्न सम्भव छ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सेक्स वा शायद बच्चाले? सुरू गर्न, सम्झनुहोस् कि यदि तपाईं एक मानिसमा चासो छैन भने, कुनै चालहरू मद्दत गर्नेछैन। त्यसकारण, प्रश्नको जवाफ के हो कि यो बच्चालाई एक व्यक्ति बाँध्न सम्भव छ यकिन निश्चित छैन। के यौनसँग एक व्यक्तिलाई बाँध्न सम्भव छ, तपाइँ सोध्नुहुन्छ? हो, तपाई बाँध्न सक्नुहुन्छ, तर केवल केहि समयको लागि। तपाईंले प्राप्त गर्न सक्नु भन्दा अधिकतम समय एक व्यक्तिको इच्छा राम्रो सेक्सको एक भागको लागि तपाईंलाई आउन चाहन्छ। तर यी बैठकहरू नियमित हुनेछन् भन्ने अपेक्षा नगर्नुहोला, र एक दिन तिनीहरू बन्द हुनेछन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। यसकारण केवल सेक्स पर्याप्त छैन, एक विवाहित मान्छेले शरीर र आत्माको लागि दुवैको लागि आराम खोज्नु पर्छ। खराब मूड र उपेक्षा उपस्थिति तपाईं अब अपमानजनक छन्। सामान्यतया, तपाईं यो मान्छे को लागि एक सपना बन्नै पर्छ, र त्यस पछि, सम्भवतः त्यो तपाईंको हुनेछ। तर सम्झनुहोस्, उद्यम जोखिम खतरनाक छ र सफलता गारंटी गर्न सक्दैन।
यदि तपाईं विभिन्न जादुई कार्यहरु को दृष्टिकोण देखि "टाई" शब्द विचार गर्दै हुनुहुन्छ जस्तै कि भाग्य बोल्ने र निहित, निस्सन्देही सोच जस्तो, तपाईं साँच्चै यो सबै मा विश्वास गर्नुहुन्छ, र त्यसैले यो आवश्यक छ। सबै पछि, कुनै पनि बाध्यकारी व्यक्ति को मुक्त इच्छा मानिसको विरुद्ध हिंसा हो। के तपाईं साँच्चै आफ्नो प्रिय संग यो गर्न चाहनुहुन्छ?
पति एक मनोवैज्ञानिक को पत्नी - सल्लाह नहीं चाहता
कसरी पुरुषलाई ईर्ष्या छ भनेर बुझ्न सकिन्छ?
पतिलाई कसरी पुन: प्रेम गर्ने?
विवाहित मानिससँग सम्बन्ध
आफ्नो पतिसँग कसरी मेल खाने?
पुरुषहरू के चाहन्छन्?
यदि एक व्यक्ति प्रेममा पर्दैन भने, उसले कसरी व्यवहार गर्छ?
महिलाहरूको गुण गर्ने पुरुषहरूको गुणहरू
कसरी आफ्नो पतिलाई प्रेम गर्न रोक्न?
मानिसको साथ पहिलो मिति
पुरुषहरू कसरी हेरफेर गर्छन्?
मानिसको साथ सम्बन्ध कसरी निर्माण गर्ने?
पोशाक - फैशन 2015
53 वटा शहरहरू भेट्न लायक छन्
Duchess Camilla हामीलाई लेडी गगा संग सामान्य मा के थियो भनेर हामीलाई भन्यो
मृत्युको डरबाट कसरी हटाउन सकिन्छ?
स्वादको साथ कसरी ड्रेस गर्ने?
ब्राड पिट पहिलो पटक एन्जिलिना जोलीको तलाकबारे समाचार पछि सार्वजनिक भए
कुत्तों को लागि Enroxil
के मलाई मशरूम सफा गर्न आवश्यक छ?
कुन दिनमा खर्बेशन हुन्छ?
बैग शरद ऋतु - जाडो 2014
शरीरमा moles को उपस्थिति
कसरी आफ्नै हातमा पर्दा सिलाई गर्ने?
मास्कोमा स्केटिङ रिंक खोल्नुहोस्
घुट्ने संयुक्त को हाइगोमा
कस्तो प्रकारको चिकित्सक एक vertebrologist छ, के विशेषज्ञ हुन सक्छ?
चिफन ब्लाउज बिना आस्तीन
हज्जन सबै चीज छ जुन तपाईं जान्न चाहानु भएको छ
ईवा लङ्गुरियाले आफ्नो पति जोस एन्टोनियो बस्टनलाई तलाक गर्ने निर्णय गरे
शिशु बप्तिस्मा को सिकार
कुन दिन मस्तिष्क मापन पछि ovulation हुन्छ?